GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bislama Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chol Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish French Galician Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Javanese Kabyle Kachin Kazakh Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mazatec (Huautla) Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Nepali Ngabere Nias Norwegian Oromo Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tongan Totonac Tsonga Turkish Turkmen Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Valencian Venda Vezo Vietnamese Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Ndịàmà Jehova kweere na iwu na ihe ndị ọzọ Baịbụl kwuru ga-enyere onye ọ bụla aka ịna-eme ihe na-amasị Chineke nakwa ihe ga-abara anyị uru. (Aịzaya 48:17, 18) Ọ bụghị anyị ji aka anyị mee iwu ndị ahụ ma ọ bụ dee ihe ndị ahụ dị́ na Baịbụl, ma anyị na-eme ha. Lee otú ụfọdụ n’ime ha si gbasa nwoke na nwaanyị ịkpa tupu ha alụọ. *
Chineke achọghị ka di na nwunye tisaa. (Matiu 19:6) Ndịàmà Jehova ejighị okwu nwoke na nwaanyị ịkpa egwu egwu n’ihi na ha weere ya na nwoke na nwaanyị kpawa, ọ pụtara na ha chọrọ ịlụ.
Ọ bụ naanị ndị toruru ịlụ di ma ọ bụ nwunye kwesịrị ịna-akpa. Ndị dị́ otú ahụ agafeela oge Baịbụl kpọrọ “oge ntoju ntorobịa” ma ọ bụ oge agụụ mmekọahụ na-agụsi mmadụ ike.—1 Ndị Kọrịnt 7:36.
Onye ya na mmadụ na-akpa kwesịrị ịbụ onye nweere onwe ya ịlụ di ma ọ bụ nwunye. N’anya Chineke, ụfọdụ ndị gbara alụkwaghịm ma ọ bụghị n’ihi na di ha ma ọ bụ nwunye ha kwara iko, ekwesịghị ịlụgharị di ma ọ bụ nwunye.—Matiu 19:9.
E nyere Ndị Kraịst chọrọ ịlụ di ma ọ bụ nwunye iwu ka ha lụọ naanị onye ha na ha kweere otu ihe. (1 Ndị Kọrịnt 7:39) Ndịàmà Jehova kweere na iwu a anaghị ekwu banyere onye na-anaghị akatọ ihe anyị kweere, kama na ọ bụ onye kweere ihe anyị kweere, bụrụkwa Onyeàmà Jehova e mere baptizim. (2 Ndị Kọrịnt 6:14) Kemgbe ụwa, Chineke na-agwa ndị na-efe ya ka ha na-alụ naanị ndị ha na ha kweere otu ihe. (Jenesis 24:3; Malakaị 2:11) Ndị na-eme nchọnchọ n’oge a achọpụtala na iwu a Chineke nyere bara ezigbo uru. *
Ndị na-eto eto kwesịrị ịna-erubere ndị mụrụ ha isi. (Ilu 1:8; Ndị Kọlọsi 3:20) Iwu a pụtara na ndị na-eto eto ka bi n’ụlọ nne na nna ha kwesịrị irube isi n’ihe nne na nna ha kpebiri gbasara otú ha na nwoke ma ọ bụ nwaanyị ga-esi na-akpa. Ha nwere ike ikwu afọ ole nwa ha ga-adị tupu ya na mmadụ akpawa nakwa ihe ndị ha nwere ike ime na ihe ndị ha na-ekwesịghị ime.
Onyeàmà Jehova ọ bụla na-eburu ihe Baịbụl kwuru n’obi jiri aka ya kpebie ma ya na mmadụ ọ̀ ga-akpa nakwa onye ya na ya ga-akpa. Ihe a dabara n’ihe Baịbụl kwuru. Ọ sịrị: “Onye ọ bụla ga-ebu ibu nke ya.” (Ndị Galeshia 6:5) Ma, abịa n’ihe gbasara nwoke na nwaanyị ịkpa, ọtụtụ ndị na-agakwuru ụmụnna ndị ma nke a na-akọ, ndị chọkwara ka ihe gaziere ha, ka ha nye ha ndụmọdụ.—Ilu 1:5.
Ọtụtụ ihe ndị chọrọ ịlụ di ma ọ bụ nwunye na-eme mgbe ha na-akpa bụ mmehie dị́ oké njọ. Dị ka ihe atụ, Baịbụl nyere iwu ka anyị zere mmekọahụ rụrụ arụ. Ọ bụghị naanị ịkwa iko ka a na-ekwu okwu ya, kama omume rụrụ arụ ndị na-alụbeghị di na nwunye na-eme, dị ka imetụ ihe mmadụ ji bụrụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị aka ma ọ bụ isi n’ọnụ ma ọ bụ n’ikè na-enwe mmekọahụ. (1 Ndị Kọrịnt 6:9-11) Ndị na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye igwusadị ibe ha egwuregwu ga-eme ka inwe mmekọahụ gụwa ha agụụ bụ “adịghị ọcha.” Jehova kpọkwara ya asị. (Ndị Galeshia 5:19-21) Baịbụl katọkwara iji “okwu rụrụ arụ” akparịta ụka.—Ndị Kọlọsi 3:8.
Obi mmadụ, ma ọ bụ ihe mmadụ bụ n’ime, dị́ aghụghọ. (Jeremaya 17:9) O nwere ike ime ka mmadụ mee ihe ọ ma na ọ dịghị mma. Ọ bụrụ na mmadụ abụọ chọrọ ịlụ achọghị ka obi ha ghọgbuo ha, ha agaghị na-anọ naanị ha n’ebe ọnwụnwa nwere ike ịbịara ha. Ha nwere ike ikpebi ihe ndị ga-enyere ha aka izere ọnwụnwa, dị ka ịna-eso ndị ọzọ akpapụ ma ọ bụ ịchọta onye ga na-anọnyere ha. (Ilu 28:26) Ndị Kraịst na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye ma na isi n’Ịntanet achọ onye ha ga-alụ na-akpata ọtụtụ nsogbu. Otu n’ime nsogbu ahụ bụ mmadụ na onye ọ na-amachaghị ịkpa.—Abụ Ọma 26:4.
^ para. 2 Nwoke na nwaanyị ịkpa tupu ha alụọ abụghị omenala obodo niile. Baịbụl ekwughị na nwoke na nwaanyị ga-akparịrị tupu ha alụọ, o kwughịkwa na ọ bụ naanị otú e si alụ di na nwunye.
^ para. 6 Dị ka ihe atụ, otu isiokwu dị́ n’akwụkwọ a kpọrọ Marriage & Family Review kwuru na e mere nchọpụta ugboro atọ gbasara ihe na-eme ka di na nwunye na-ebite aka. Nchọpụta ndị ahụ gosiri na ikpe otu okpukpe na ikwere otu ihe so eme ka ndị di na nwunye ghara itisa. Ha na-ebirukwa iri afọ abụọ na ise ruo iri afọ ise, ka na-ebikwa.
Gịnị bụ nwoke na nwaanyị ịkpa tupu ha alụọ?
Ọ bụ nwoke na nwaanyị nwere mmasị n’ibe ha ịna-anọrị. Ha nwere ike ịna-eso ndị ọzọ anọrị ma ọ bụ na anọ naanị ha. O nwere ike ịbụ naanị ha abụọ ga-ama banyere ya ma ọ bụkwanụ ha agwa ndị ọzọ. Ha nwekwara ike ịna-ezigara ibe ha naanị ozi ma ọ bụ na akpọ ibe ha n’ekwentị ma ọ bụkwanụ na-akpa ihu n’ihu. Ndịàmà Jehova anaghị ewere nwoke na nwaanyị ịkpa ka ihe egwuregwu. Ha weere ya ka ihe mmadụ abụọ chọrọ ịlụ na-eme.
Nwoke na Nwaanyị Ịkpa Alụmdi na Nwunye na Ezinụlọ Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị Gbasara Ndịàmà Jehova